3 Okhiye Bokubhala Ngokuphumelelayo | Martech Zone
3 Okhiye Bokubhala Ngokuphumelelayo
NgoLwesithathu, ngoMashi 23, 2011 NgoLwesine, Septhemba 19, 2013
Ikhophi enhle yinto ehlekisayo. Kunzima ngokumangalisayo ukudala kepha kulula ukugaya. Ukubhalwa kwamakhophi okuhle kulula, kuyaxoxa, kunengqondo futhi kufundeka kalula. Kufanele ibambe ingqikithi nomoya womkhiqizo, wensizakalo noma wenhlangano, ngenkathi ixhuma ngqo nomfundi.
Unzima umsebenzi wombhali wamakhophi. Okokuqala, kufanele ukudilize lokho obhala ngakho kuye ezingeni eliyisisekelo kakhulu. Ukubhala ngokubhala akuyona indawo yokukhombisa ukuthi mangaki amagama amakhulu owaziyo. Imayelana nokufika ephuzwini nokukhulisa inani. Kepha akukhona nje ngomkhiqizo.
Ukwazi ikhasimende kuyisinyathelo sokuqala sokubhala ikhophi elisebenzayo.
Lowo musho wokugcina ubaluleke kakhulu ngizowuphinda. Ukwazi ikhasimende kuyisinyathelo sokuqala sokubhala ikhophi elisebenzayo.
Noma ngabe ubhala ikhophi yokukhangisa, incwadi yezindaba yenkampani, noma ucingo olulodwa oluya esenzweni, umsebenzi wombhali wokukopisha ukungena ngaphakathi kwekhanda lomfundi. Yini isikhathi sabo sokunaka? Balindeleni? Umkhiqizo uzoletha kanjani inani kubo? Kungani kufanele bahambe nomkhiqizo othile kunenye?
Ukwazi izithameli ezihlosiwe kuzokusiza uqonde ukuthi bazoyisebenzisa kanjani ikhophi. Hlobo luni lwezinto ezilindelwe noma okuhlangenwe nakho okwedlule abanakho nenkampani noma umkhiqizo ukuphonsa kwakho? Uhlobo luni lwesenzo noma impendulo ozama ukukucela kubo?
Le yimibuzo embalwa nje yababhali bamakhophi ababuza kahle ngaphambi kokwenza iphimbo. Lapho wazi okwengeziwe ngomfundi wakho ohlosiwe, kuba lula kakhulu ukunxenxa emugqeni wabo ophansi. Iphimbo eliqinile lenzelwe ukwazisa umfundi ukuthi uyenza kanjani impilo yabo ibe lula.
Ukungena engqondweni yomfundi wakho ofanele kukusiza uqonde ukuthi bazowusebenzisa kanjani umkhiqizo ozama ukuwuthengisa. Isinyathelo sesidleke sihlela iphimbo ukuhlangabezana nezidingo zabo ezithile. Kunezindlela eziningi zokufaka umkhiqizo ofanayo, kepha ababhali bamakhophi abalungile bathola indlela esebenza kahle kakhulu.
Nasi isibonelo: Ngibona kalula izinhlobo ezine noma ezinhlanu zamakhasimende anentshisekelo yokuthenga i-lap top entsha, kepha zonke zihlobana nomkhiqizo ngokuhlukile.
I-tech geek ingahle ifune ukwazi ama-processor weprosesa, ukuthi inamachweba amangaki e-USB, ingaphatha kahle kangakanani idatha nokuthi ixhasa luphi uhlobo lwesoftware.
Umdlali wegeyimu unesifiso sejubane le-inthanethi, ikhwalithi yevidiyo, ikhadi lomsindo, yimiphi imidlalo etholakalayo futhi uma ikwazi ukuphatha isilawuli.
Ibhizinisi pro kungenzeka lifuna ukuxhumeka kwe-wi-fi, ukusetshenziswa okulula, ukuhambisana kwedokhumenti nokusekelwa kwe-tech.
I-audiophile ilanda izingoma eziningi ngasikhathi sinye futhi ifuna ukwazi ukudlala ilabhulali yakhe yomculo ekhula njalo ngohlelo lwasekhaya stereo.
Ngoba sikhombe izethameli eziqondiwe nezidingo zabo, singaqokomisa umkhiqizo ngendlela engcono kakhulu yokuhlangabezana nalezo zidingo.
Sokucaba Pitch Organically
Kulezi zinsuku ikhophi eningi embi igxile ekusebenziseni amagama angukhiye kuphela. Izimiso ze-SEO ziyindawo enhle yokuqala, kepha umbhali wamakhophi omuhle ubeka ngamagama asemqoka ngokwemvelo, ngaphandle kokubaphoqa ukuba bangene ezindaweni okungezona ezabo. Ababhali abangalungile bavele babagcwale, benze amagama angukhiye avelele njengosomahlaya emngcwabeni.
Ngokubona kwami, ukubhala okuhle kunakho konke akuzwakali njengokuthengisa okunzima. Abathengi abaningi abathandi ukushaywa ekhanda nge-pitch. Zihlobene nemikhiqizo evumelana nezidingo zabo nemizwa yabo. Kungakho kubaluleke kakhulu ukwenza umlenze uma kukhulunywa ngokucwaninga izethameli nomkhiqizo.
Ucabangani? Ufunani ekubhaleni okusebenzayo? Shiya imicabango kumazwana angezansi.
I-Disqus: Iphinda ibambe iqhaza lezinhlelo zokuphawula